Momba ny Alietc.com
Tsena Alietc B2B izay mitondra soa aman-tsara ny mpividy, mpamatsy sy mpamokatra avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, miaraka amina sehatra iray mavitrika.
Alietc dia tsy mitovy amin'ny tsena mahazatra nomerika fanta-daza toy ny Alibaba, Amazon, Taobao, indrindra satria nahafantatra ny lesoka tamin'ireny sehatra rehetra ireny ary ialana tsy manao hadisoana mitovy.
Ny tombony lehibe indrindra nataon'i Alietc dia ny tsy fanefana sarany ny fifanakalozana, ka ny mpividy, ny mpamatsy sy ny mpanamboatra dia afaka mifantoka amin'ny tsipika farany ambany fa tsy manahy momba ny fandoavana ny vaomiera.
Raha tokony handoa vaomiera any amin'ny faran'ny fifanakalozana ianao, dia i Alietc kosa dia mandoa onitra isam-bola amin'ny lisitry ny vokatra na hanoratra mba hanome tolotra amin'ny vokatra amidy.
Misy antony roa noho ireo sarany ireo. Voalohany, miantoka fa ireo izay mihaino na manolotra tolotra ho an'ny vokatra dia tena madiodio amin'ny fanaovana asa aman-draharaha. Faharoa, tiantsika ny hitazona ny vidin'ny mpampiasa kely indrindra amin'ny sehatra. Ohatra, ampitahao ny fonosantsika amin'ny vidin'ny vidim-bidy ho an'ny Amazon izay, amin'ny ankapobeny, mandoa eo ho eo amin'ny 13% amin'ny vidin'ny varotra. Izahay dia tsy mila mandoa vola na mandrara rehefa mifampiraharaha, tiantsika ny hampiroborobo azy ireo!
Tsy manome ny sehatra fotsiny i Alietc dia avelao ianao, ilay mpampiasa, hanao ireo asa mafy rehetra. Niasa mavitrika i Alietc mba hitondran'ny olona tahaka ny tenanao any amin'ny lampihazo, amin'ny alàlan'ny fampiasana SEO lehibe ho an'ny vokatra voatanisa rehetra. Alietc dia sehatra mavitrika amin'ny fomba tsotra ary tsotra fotsiny satria manintona ireo mpampiasa izay manolo-tena mafy amin'ny fanaovana asa soa ary mametraka fifandraisana mahasoa mandritra ny fotoana maharitra.
Nolazainay ihany koa fa tsena 'interactive' izao. Midika izany fa mamorona vondron'olona iray orinasa izahay ary ny fifandraisana tsara no fanalahidin'ny fahombiazana. Izany resaka izany dia tsy hoe manao asa be dia be ihany, fa mamela ihany koa valiny mba ho hitan'ny rehetra. Ny antony manentana ny mpanamboatra sy ny mpamatsy dia ny fananganana laza malaza amin'ny kalitao sy ny fahatokisana, fa ny mpividy kosa no kendrena mba hamaranana ny fifanarahana ara-matihanina sy haingana, miaraka amin'ny kely indrindra hanelingelina.
Tsena B2B DIGITAL iray, fiteny samihafa samihafa
Ny fivoaran'ny teknolojia lalandava sy ny tombony isan-karazany dia nahafahan'ny ALIETC niasa tamin'ny alàlan'ny tranokala tambajotra 105 niaraka tamin'ny fiteny 105 samihafa, anisan'izany ny sinoa, alemanina, arabo, ary frantsay.
Ny hevitra ao ambadik'ity fomba multinational marobe ity dia ny fanaovana ny fikatsahana ny fividianana sy ny vokatra ho mora sy mahomby ho an'ny rehetra, na inona na inona ny zom-pireneny.
Rehefa mametraka vokatra iray ny mpamatsy, dia voadika amin'ny fiteny 105 samihafa ny famaritana azy, ao amin'ny tranokala 105.
Ity dingana eo noho eo ity, automatique dia hiteraka fisintonana bebe kokoa ny mpanjifa avy any amin'ny firenena maro eran'izao tontolo izao, ka mamonjy ny lalana mankany amin'ny tsena mahomby izay mifantoka amin'ny maha-zava-dehibe ny fahazoana amin'ny mpampiasa mpampiasa multinasy.
Azonao jerena eto ny tombontsoa feno an'ny Alietc eto:
Avy amin'ny akanjo mankany amin'ny seramika, fanaka an-tsakafon'ny baolina kitra, elektronika ho an'ny zavatra hafa rehetra, na inona na inona anamboarinao, ny lakilen'ny fahombiazan'ny orinasanao dia mahazo fidirana amin'ireo mpividy ny tena vokatra, vonona sy mahay.
Hamaky bebe kokoa…
Na hiantsena amin'ny entana amboarina na fitaovana madinidinika ianao, ny fidirana amin'ny tsena nomerika Alietc dia mety ho varotra ihany. Na mivarotra entana amina mpanjifa toy ny kilalao, akanjo na kojakojan-dakozia, na miantoka amin'ny fitaovana manta toy ny bauxite sy potash, amin'ny alàlan'ny lamba sy plastika.
Raha mitady mividy vokatra ianao dia azo antoka fa tonga any amin'ny toerana mety. Alietc dia "Cavatr'i Aladdin" azo antoka fa ny vokatra rehetra na ny sain-javatra mety ho azonao eritreretina fotsiny, ary maro no mbola tsy fantatrao akory fa nisy.